Ingobo Yomlando: Izindaba Zekhasino -
Izinselelo Zentwasahlobo: Kufika kuma-spins wamahhala angama-300
I-12 Ephreli, 2021
Joyina Izinselelo zeBetsson Spring bese ufune kuze kufike ku-300 Spins yamahhala! KuCasino, kuwo wonke ama-10 PLN abhejwa kunoma iziphi izikhala, uzothola ama-000 spins wamahhala. Ukubamba iqhaza ekunyusweni, ... Okuningi
I-30 spins yamahhala ku-A Tale of Elves yokubhaliswa
I-7 Disemba, 2020
Ukunikezwa kweholide okumangazayo kwabo bonke abadlali abasha, ngokuvula i-akhawunti ungathola ama-spins wamahhala angama-30 kumdlalo i-Tale of Elves. Faka ikhodi yephromo MERRY30. Ungayithola kanjani ... Okuningi